ရန်ကုန်မြို့ပတ် Bus ကားကို Scania ကားသစ်များနဲ့ စတင်ပြေးဆွဲတော့မည် – ရှအေလငျး
ရန်ကုန်မြို့ဟာ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ အဓိက စီးပွားရေးအချက်အချာကြတဲ့ မြို့ကြီးပဲ ဖြစ်ပါတယ်…. လူဦးရေ ၈ သန်းနီးပါးလောက်အထိ ဖြစ်လာခဲ့တဲ့ ရန်ကုန်မြို့ကြီးဟာ များပြားလှတဲ့ လူတွေအတွက် သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအဖြစ် YBS လိုင်းတွေ၊ Water Bus တွေ၊ ပုဂ္ဂလိက အငှားယာဉ်ဝန်ဆောင်မှုတွေ၊ မြို့ပတ်ရထားတွေနဲ့ ဝန်ဆောင်မှုပေးနေပါတယ်….ရန်ကုန်မြို့တွင်း တစ်နေရာကနေ တစ်နေရာကို သက်ဆိုင်ရာ YBS ယာဉ်လိုင်းတွေနဲ့ စီးနင်းသွားလာနိုင်ပြီးတော့ ရန်ကုန်တစ်မြို့လုံးကို ပတ်ပေးတာကတော့ မြန်မာ့မြို့ပတ်မီးရထားလိုင်းပဲ ရှိခဲ့ရာက အခုဆိုရင် YBS မြို့ပတ် Bus ကားတွေ စတင်ပြေးဆွဲပေးတော့မှာပဲ ဖြစ်ပါတယ်….
ရန်ကုန်မြို့၏ ပထမဆုံး မြို့ပတ်ဘတ်စ်ကားကို City Transit ကုမ္ပဏီက တာဝန်ယူပြေးဆွဲသွားမှာ ဖြစ်တယ်လို့ သိရပြီး ပြေးဆွဲခွင့်ပြုထားပြီးဖြစ်တယ်လို့ ရန်ကုန်တိုင်း ဒေသကြီးသယ်ယူပို့ဆောင်ရေး ကြီးကြပ်ကွပ်ကဲမှုအာဏာပိုင်အဖွဲ့ (YRTA)ရဲ့ အတွင်းရေးမှူးဖြစ်တဲ့ ဒေါက်တာမောင်အောင်က ပြောပါတယ်…အဆိုပါ YBS မြို့ပတ် Bus ကားကို ရန်ကုန်မြို့က Bus ကားသမိုင်းမှာ လုံးဝမရှိသေးတဲ့ မြို့တွင်းဘတ်စ်ကားပြေးဆွဲ မှုသက်တမ်းတစ်လျှောက် ပထမ ဆုံးဖြစ်တဲ့ Scania အမျိုးအစားကားတွေနဲ့ ပြေးဆွဲမှာ ဖြစ်တယ်လို့ သိရပါတယ်….
Scania ဆိုတာ ဆွီဒင်နိုင်ငံထုတ် နာမည်ကြီး Bus အမျိုးအစားဖြစ်ပြီးတော့ လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံမှာ အဝေးပြေးယာဉ်လိုင်းတွေသာ သုံးစွဲနေကြတာဖြစ်ပါတယ်…
ခုလို မြို့တွင်းသုံးအဖြစ် ပြေးဆွဲမယ်ဆိုတော့ ခရီးသည်တွေ သက်တောင့်သက်သာ ဇိမ်ကျကျ စီးနင်းနိုင်တော့မှာ ဖြစ်ပါတယ်…
ပြေးဆွဲမဲ့လမ်းကြောင်းကတော့ အောင်မင်္ဂလာအဝေးပြေး-ခြောက်ကွေ့-မြောက်ဥက္က လာပအ၀ိုင်း-ဂန္ဓမာဟိုးဆေး- ညောင်ပင်-ဘေလီ-စံပြဈေး- သွားဆေးတက္ကသိုလ်-သုဝဏ္ဏ ဈေး-ပုဇွန်တောင်-ဗိုလ်တ ထောင်-ကမ်းနားလမ်း-သခင်မြ ပန်းခြံ-ကြည့်မြင်တိုင်ကမ်းနား လမ်း-ဘုရင့်နောင်လမ်း-ဘုရင့် နောင်လမ်းဆုံ-သမိုင်းလမ်းဆုံ- ရှစ်မိုင်-မြောက်ဥက္ကလာအ၀ိုင်း- ခြောက်ကွေ့-အောင်မင်္ဂလာအ ဝေးပြေးလမ်းကြောင်းအတိုင်း ပြေးဆွဲမှာ ဖြစ်တယ်လို့ YRTA က ထုတ်ပြန်ပေးထားပါတယ်…
အဲဒီလမ်းကြောင်း အစ အဆုံး ဟာ ၄၇ ကီလီုမီတာ ကွာဝေးပြီးတော့ လမ်းရှင်းချိန်မှာဆို ခရီးစဉ်တစ်ပတ်ကို ၃ နာရီခွဲခန့် ကြာနိုင်တယ်လို့ သိရပါတယ်…
အကောင်းစား Scania ကားအသစ်ကြီးနဲ့ ပြေးဆွဲမဲ့ မြို့ပတ်ခရီးစဉ်အတွက် ယာဉ်စီးခကိုတော့ အောင်မင်္ဂလာ အဝေးပြေးကနေ သခင်မြပန်းခြံအထိကို ကျပ် ၅၀၀ ဖြစ်ပြီးတော့ မြို့တစ်ပတ်လုံးကိုဆို ငွေကျပ် ၁,၀၀၀ သတ်မှတ်ထားတယ်လို့ ဆိုပါတယ်…
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ရန်ကုန်တစ်မြို့လုံးကို ပတ်ပေးမဲ့ YBS ယာဉ်လိုင်းပေါ်ပေါက်လာခြင်းဟာ ခရီးသွား ပြည်သူတွေအတွက် အဆင်ပြေနိုင်မှာ ဖြစ်ပြီး Scania ကားတွေနဲ့ ပြေးဆွဲမှာ ဖြစ်လို့ သက်တောင့်သက်သာ စီးနင်းနိုင်မှာပဲ ဖြစ်ပါတယ်…
ရနျကုနျမွို့ဟာ မွနျမာနိုငျငံရဲ့ အဓိက စီးပှားရေးအခကျြအခြာကွတဲ့ မွို့ကွီးပဲ ဖွဈပါတယျ…. လူဦးရေ ၈ သနျးနီးပါးလောကျအထိ ဖွဈလာခဲ့တဲ့ ရနျကုနျမွို့ကွီးဟာ မြားပွားလှတဲ့ လူတှအေတှကျ သယျယူပို့ဆောငျရေးအဖွဈ YBS လိုငျးတှေ၊ Water Bus တှေ၊ ပုဂ်ဂလိက အငှားယာဉျဝနျဆောငျမှုတှေ၊ မွို့ပတျရထားတှနေဲ့ ဝနျဆောငျမှုပေးနပေါတယျ….ရနျကုနျမွို့တှငျး တဈနရောကနေ တဈနရောကို သကျဆိုငျရာ YBS ယာဉျလိုငျးတှနေဲ့ စီးနငျးသှားလာနိုငျပွီးတော့ ရနျကုနျတဈမွို့လုံးကို ပတျပေးတာကတော့ မွနျမာ့မွို့ပတျမီးရထားလိုငျးပဲ ရှိခဲ့ရာက အခုဆိုရငျ YBS မွို့ပတျ Bus ကားတှေ စတငျပွေးဆှဲပေးတော့မှာပဲ ဖွဈပါတယျ….
ရနျကုနျမွို့၏ ပထမဆုံး မွို့ပတျဘတျဈကားကို City Transit ကုမ်ပဏီက တာဝနျယူပွေးဆှဲသှားမှာ ဖွဈတယျလို့ သိရပွီး ပွေးဆှဲခှငျ့ပွုထားပွီးဖွဈတယျလို့ ရနျကုနျတိုငျး ဒသေကွီးသယျယူပို့ဆောငျရေး ကွီးကွပျကှပျကဲမှုအာဏာပိုငျအဖှဲ့ (YRTA)ရဲ့ အတှငျးရေးမှူးဖွဈတဲ့ ဒေါကျတာမောငျအောငျက ပွောပါတယျ…အဆိုပါ YBS မွို့ပတျ Bus ကားကို ရနျကုနျမွို့က Bus ကားသမိုငျးမှာ လုံးဝမရှိသေးတဲ့ မွို့တှငျးဘတျဈကားပွေးဆှဲ မှုသကျတမျးတဈလြှောကျ ပထမ ဆုံးဖွဈတဲ့ Scania အမြိုးအစားကားတှနေဲ့ ပွေးဆှဲမှာ ဖွဈတယျလို့ သိရပါတယျ….
Scania ဆိုတာ ဆှီဒငျနိုငျငံထုတျ နာမညျကွီး Bus အမြိုးအစားဖွဈပွီးတော့ လကျရှိမွနျမာနိုငျငံမှာ အဝေးပွေးယာဉျလိုငျးတှသော သုံးစှဲနကွေတာဖွဈပါတယျ…
ခုလို မွို့တှငျးသုံးအဖွဈ ပွေးဆှဲမယျဆိုတော့ ခရီးသညျတှေ သကျတောငျ့သကျသာ ဇိမျကကြ စီးနငျးနိုငျတော့မှာ ဖွဈပါတယျ…
ပွေးဆှဲမဲ့လမျးကွောငျးကတော့ အောငျမင်ျဂလာအဝေးပွေး-ခွောကျကှေ့-မွောကျဥက်က လာပအဝိုငျး-ဂန်ဓမာဟိုးဆေး- ညောငျပငျ-ဘလေီ-စံပွဈေး- သှားဆေးတက်ကသိုလျ-သုဝဏ်ဏ ဈေး-ပုဇှနျတောငျ-ဗိုလျတ ထောငျ-ကမျးနားလမျး-သခငျမွ ပနျးခွံ-ကွညျ့မွငျတိုငျကမျးနား လမျး-ဘုရငျ့နောငျလမျး-ဘုရငျ့ နောငျလမျးဆုံ-သမိုငျးလမျးဆုံ- ရှဈမိုငျ-မွောကျဥက်ကလာအဝိုငျး- ခွောကျကှေ့-အောငျမင်ျဂလာအ ဝေးပွေးလမျးကွောငျးအတိုငျး ပွေးဆှဲမှာ ဖွဈတယျလို့ YRTA က ထုတျပွနျပေးထားပါတယျ…
အဲဒီလမျးကွောငျး အစ အဆုံး ဟာ ၄၇ ကီလီုမီတာ ကှာဝေးပွီးတော့ လမျးရှငျးခြိနျမှာဆို ခရီးစဉျတဈပတျကို ၃ နာရီခှဲခနျ့ ကွာနိုငျတယျလို့ သိရပါတယျ…
အကောငျးစား Scania ကားအသဈကွီးနဲ့ ပွေးဆှဲမဲ့ မွို့ပတျခရီးစဉျအတှကျ ယာဉျစီးခကိုတော့ အောငျမင်ျဂလာ အဝေးပွေးကနေ သခငျမွပနျးခွံအထိကို ကပျြ ၅၀၀ ဖွဈပွီးတော့ မွို့တဈပတျလုံးကိုဆို ငှကေပျြ ၁,၀၀၀ သတျမှတျထားတယျလို့ ဆိုပါတယျ…
ဘာပဲဖွဈဖွဈ ရနျကုနျတဈမွို့လုံးကို ပတျပေးမဲ့ YBS ယာဉျလိုငျးပျေါပေါကျလာခွငျးဟာ ခရီးသှား ပွညျသူတှအေတှကျ အဆငျပွနေိုငျမှာ ဖွဈပွီး Scania ကားတှနေဲ့ ပွေးဆှဲမှာ ဖွဈလို့ သကျတောငျ့သကျသာ စီးနငျးနိုငျမှာပဲ ဖွဈပါတယျ…
“မန္တလေးကျုံးရှေ့ လက်ပစ်ဗုံးကွဲ သတင်း ….မန္တလေးရဲတပ်ဖွဲ့မှ သတင်းအမှန်...
အနော်ရထာမင်းနဲ့ …ရှမ်းမင်းသမီးစောမွန်လှ…အကြောင်းကို ..သိန်း...
ထိပ်တန်းအဆင့်မှာ ကစားနေနိုင်ဆဲ ရော်နယ်ဒိုရဲ့ အံ့အားသင့်ဖွယ် လျှို့ဝှက်ချက်...